यहाँ म स्यान डिएगो यो वर्ष पहिले प्रचार एक प्रवचन केही भिडियो. यो सम्मेलन को विषय "चालित थियो”, त्यसैले म रोमी मा प्रचार गर्ने छनौट 12:1-2. यो एक विश्वासीले "संचालित हुन लागि कस्तो खोज्दैन?” मेरो मुख्य बुँदाहरू विश्वासीले गर्नुपर्छ भनेर थिए ...
1. दया संचालित हुन
2. उपासना चालित हुन
यसको उपयोगी आशा!
Nillapoet • अगस्ट 19, 2013 मा 7:47 छु • जवाफ
यात्रा, कहिल्यै पोडकास्ट रूपमा आफ्नो प्रवचन अप राख्दै विचार?
Janna हावर्ड • अगस्ट 19, 2013 मा 7:48 छु • जवाफ
यात्रा ली तपाईं एक अभिषिक्त प्रचारक हो, भगवान निश्चित तपाईँलाई एउटा उपहार दिनुभयो. ख्रीष्टमा हाम्रो अभिषिक्त र नम्र भाइ लागि परमेश्वरको प्रशंसा! प्रचार र शब्द सिकाउने लागि धन्यवाद. तपाईंको बिन्दु “यसको केवल मलाई र येशूले हामी एक परिवार छन्,” म सुन्न आवश्यक बस के थियो. धन्यवाद. तपाईंको उपहार भाइ बाहिर बस्न, हामी तपाईं को लागि प्रार्थना गर्दै!
स्टीव वाटर्स • अगस्ट 19, 2013 मा 7:48 छु • जवाफ
सुन्दर प्रवचन, तिनीहरूलाई बढी सुन्न हुनेछ. परमेश्वरको महिमा हुन
Yelowtail7 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:48 छु • जवाफ
बाडेको मा धन्यवाद … म रोमीको पुस्तकमा revisiting गरिनेछ.
मिका • अगस्ट 19, 2013 मा 7:48 छु • जवाफ
साँचो शब्द! धन्यवाद
जेनिफर Salas • अगस्ट 19, 2013 मा 7:49 छु • जवाफ
ओहो तस्वीर! कसरी मेरो युवा नेताहरूको एक मलाई उनको साथ रोमीको पुस्तकमा मार्फत जाँदै सुरु गर्न आग्रह भन्नुहोस्!! र Btw, तपाईं VERRRYYY राम्रो तरिका बोल्न, तपाईंको आशिष् :)
Jordwins Winslade • अगस्ट 19, 2013 मा 7:49 छु • जवाफ
यो मानिस साझेदारी को लागि धन्यवाद! म साझा के को धेरै अनुभव गरिएको छ, पहिलो हात… र यति परिवर्तन छैन conformed भइरहेको सन्देश साँच्चै म कहाँ छु मलाई बोल्नुहुन्छ! P.s- म सत्य आफ्नो संगीत मार्फत व्यक्त प्रेम… यसलाई सधैं त ताजा छ! :)
Dryas Elleohvee • अगस्ट 19, 2013 मा 7:49 छु • जवाफ
तपाईं soo धेरै सर धन्यवाद. यो वास्तवमा गम्भीर म सिर्फ उहाँले बस मलाई यति क्रमबद्ध को एक सफलता दिन वा मलाई केहि देखाउँछ कि परमेश्वरलाई प्रार्थना थियो जस्तै मलाई मदत. दिन को पछिल्लो जोडी को लागि म इमानदार म feelin madd निराश भएको छु भनेर भन्न सकिन्छ; वर्ग जान ओछ्यानमा बाहिर प्राप्त गर्न चाहने छैन, जब म चर्च जाने यो र whatnot तर यो बिहान म माथि महसुस छैन म उठेँ र ताजा महसुस र थियो वर्ग मा एक महान दिन त म घर आए र आफ्नो भिडियो देखे. म कहिल्यै पनि तपाईं एउटा ब्लग थियो थाह थियो.
म आफ्नो सेवाको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद. म मेरो समुदायमा तपाईं प्राप्त गर्न आवश्यक, मेरो चर्च वा केही गर्न.
धन्यवाद, धेरै माया!!
जेड Mahouna • अगस्ट 19, 2013 मा 7:50 छु • जवाफ
म जब तपाईं प्रचार बुझ्न फ्रान्स मा बाँच्न र i dont ,किनभने म बोल्दिन र बुझ्न english.can तपाईं फ्रान्सेली मा अनुवाद कृपया
बहादुर • अगस्ट 19, 2013 मा 7:50 छु • जवाफ
राम्रो काम यात्रा…जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ म स्थिति लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामीलाई निर्देशन र हामीलाई प्रोत्साहन. राम्रो काम फेरि